Luke Shaw Oo Wacad Ku Maray Inuu Cadeyn Doono In Jose Mourinho Uu Qaldan Yahay Ka Dib Eedeymihii Uu Ka Helay Tababaraha - Wargane News
Home Sports Luke Shaw Oo Wacad Ku Maray Inuu Cadeyn Doono In Jose Mourinho...
Luke Shaw ayaa wacad ku maray inuu cadeyn doono in Jose Mourinho uu qaldan yahay ka dib markii tababaraha Manchester United uu saxaafada horteeda ku dhaleeceeyay isaga.
Horaantii bishaan April, Mourinho ayaa ka hadlay walaaca uu ka qaba hamiga iyo diyaar ahaanshaha Shaw, isagoo sheegay in 21 jirkaan uu si aad ah uga danbeeyo qaar ka mid ah asxaabta la ciyaarta ee Old Trafford joogta.
Eedeyntaa ayaa timid ka dib markii daafaca bidix oo lugta ay ka jabtay bishii September ee 2015 uu kaliya hal kulan u saftay United tan iyo dhamaadkii Janaayo, iyadoo Mourinho uu ka doorbiday inuu ciyaartoyda akadeemiga ciyaarsiiyo halkii uu Shaw safi lahaa.
Shaw ayaa tan iyo markaas ku soo laabtay kooxda United isagoo wadahadalo fool ka fool ah la galay Mourinho, waxaana uu ciyaaray labadii kulan ee ugu danbeysay ee Premier League ee Everton iyo Sunderland.
Isagoo u hadlayay Sky Sports, waxa uu daafaca sheegay in eedeymaha uga yimid Mourinho ay u noqdeen dhiirogelintii ugu sareysay abid.
“Eedeymaha waa kuwa aad u adag, laakiin xilli hore xitaa waan la kulmay.
“Markaas si xun ayaan u qaatay, waxaana ay iga dhigtay mid niyadjabsan laakiin markaas waxaan la soo laabtay anigoo doonaya inaan dagaalamo, anigoo doonaya inaan cadeeyo inuu qof walba igu qaldamay.
“Dhamaadkii kulankii ay la yeeshay tababaraha, waxaa ku iri Mourinho ‘Waxaan doonayaa inaan cadeeyo inaad qaldan tahay’. Waana aaminsanahay inaan doonayo inaan saas sameeyo, kaliya nafteyda uma sameynayo laakiin taageerayaasha i garab taagnaa waqtigaan adag.”